~ Witch83၏ စိတ်ကူးကမ္ဘာ ~: လှပသော တိမ်တိုက်များအကြောင်း
မိုးနတ်ကြယ်စင် February 20, 2013 9:47 PM
စာအုပ်ဆိုင်သွားတိုင်း အဲ့စာအုပ်တော့ တွေ့တယ်...
နောက်တစ်ခါကျမှ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်လိုက်အုံးမယ် :)
witch83 February 20, 2013 10:36 PM
ဟုတ်တယ်။ “တိမ်နဲ့ချည်တဲ့ကြိုး” တဲ့ :)))
Burmese Classic ထဲမှာ ebook ရှိတယ် sis.. စာအုပ်က ရန်ကုန်မှာ ကျန်နေခဲ့လို့ အမလည်း ebook ပဲ ရှာဒေါင်းပြီး ပြန်ဖတ်ထားတာ။ ဂျူးရဲ့ အမာခံ ပရိတ်သတ်လေ.. သူ့စာအုပ်တော်တော်များများကို အပိုင်ဝယ်ထားတာ။ တချို့စာအုပ်တွေကို စလုံးကိုတောင် သယ်လာသေးတယ်။( ကြုံတုန်း ကပ်ကြွားတာ :D)
စံပယ်ချို February 23, 2013 2:51 PM
ဘယ်သူမှ မပြောလဲ ငယ်ငယ်ကတဲကခံစားမိတယ်
တိမ်တွေအရမ်းကိုလှတယ် အဲဒီစာအုပ်လဲ ဖတ်ပြီးအရမ်းကိုကြိုက်ခဲ့ဖူးတယ်
စံပယ်ချို February 23, 2013 9:06 PM
ဟုတ်မအားလို့ပါ မပြန်ဖြစ်သေးပါဘူး c-box ပေါ်မလာလို့ဒီမှာပြန်ရေးခဲ့တယ်နော်
မအားဆို တတ်နိုင်တဲ့ လုပ်အားပေးလေးတခုကိုလိုက်နေလို့ပါ----
witch83 February 24, 2013 3:05 PM
မအားတဲ့ကြားက စာလာဖတ်လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် sis Jasmine :)
cool emerald February 26, 2013 11:17 AM
အဲဒီ စာအုပျ မဖတျဘူးသေးဘူး။ ဖတျကွညျ့ခငျြသှားပွီ။
witch83 February 26, 2013 2:10 PM
Yes, Ko cool emerald, it's worth to read. It really isanice book. There is something I left to say. In the story, it also gives the idea about people's departure. A hidden plot was also in the novel. :)